Ukhamba lubunjwa ngobumba. Kunezinhlobo eziningi njengembiza
ⓘ Ukhamba lubunjwa ngobumba. Kunezinhlobo eziningi njengembiza nomancishana nezinye. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchweph ..
Ukhamba lubunjwa ngobumba. Kunezinhlobo eziningi njengembiza nomancishana nezinye. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula, nywakula eyjacula ukhamba nezinye lubunjwa kuumpganilli.